Vietnam: Ny Fomba Fijerin’ny Mponin’ny Aterineto Ny Lelafo Olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Avrily 2018 3:24 GMT
Nifamatotra tamin'ny an'i Shina ny tantaran'i Vietnam nandritra ny an'arivony taona. Betsaka ireo onjanà Shinoa mpanani-bohitra nifehy an'i Vietnam nandritra ny maherin'ny antsasaky ny roa arivo taona farany teo, ary nihanatanjaka ny dindony tamin'ny fiteny sy ny kolontsaina Vietnamiana raha oharina amin'ny an'ny firenena hafa mifanila vodirindrina aminy. Lasa manaraka ny Bodisma Mahayana ny vahoaka Vietnamiana, ary mitohy misy fiantraikany amin'ny rafi-panabeazana ny “Confucianism”. Betsaka ny fototra Mon-Khmer niaingan'ny fiteny Vietnamiana no saika efa tototry ny tsindry mavesatra avy amin'ireo teny Shinoa maro nindramina, ny fampiasàna ny fanononana ny tsindrimpeo Shinoa, ary mandra-panekena ny rafitra fanoratra Latinina, ny endri-tsoratra Shinoa.
Mety hoe efa toetrantsika olombelona ny mihevitra fa arakaraky ny ifanakaikezantsika ara-kolontsaina, no ahatsapantsika ny halehiben'ny fahasamihafàntsika. Mbola tsy mitsahatra ny mitsotsoka ny lelafon'ny fandripahana tamin'ny Ady Lehibe II ny Shinoa ary manafàna ny fankahalàna Japoney. Manao ny torak'izany koa ny Vietnamiana – saingy mampitodika ny hatezerany ho amin'i Shina. Toy ny naneken'ny governemantan'i RDC avy hatrany ireo hetsika manohitra ny vahoaka Japoney, ny hetsika manohitra ny vahoaka Shinoa no toa hany tokana tazana teny amin'ny araben'i Hanoi na ny an'i Ho Chi Minh. Manontania anie olona teratany Vietanianina hitanao mandehandeha eny e, hoe: “Firenena iza no tena hàlanao indrindra?” fa mety hitovitovy amin'izao ny valiny, “Shina!”. Nahilik'ireo mpifanolo-bodirindrina ny fahasamihafàn'izy ireo ho fitsinjovana ny varotra, ary tamin'ny taona 2005, 17 taona taorian'ny nanafihan'i Shina farany ny faritra avaratr'i Vietnam, dia lasa i Shina no mpiara-miasa lehibe indrindra amin'i Vietnam eo amin'ny sehatry ny varotra.
Nanam-potoana tsara mihitsy ny vahoaka Vietnamiana hanehoany ny fihetsehampony tsy tia Shinoa tamin'ny fandalovan'ny lelafo Olaimpikan'i Beijing izay natao tao amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh, fa ny tsy itovizany amin'ny hetsika fanoherana ny Shinoa any Andrefana dia izy tsy misy ifandraisany amin'i Tibet ny fitarainan'izy ireo. Toa tsy voasakan'ny haino aman-jerim-panjakàna ao Vietnam ny demokrasiam-bahoaka sy ny hetsi-panoherana hitakiana ny fahalalahana, ary tsy dia nasiana resaka loatra ny hetsi-panoheran'i Tibet sy ny moanina ao Burma. Ny Vietnamiana kosa dia nifantoka betsaka tamin'ireo Nosikelin'i Spratley sy Paracel, faritry ny tany tsy dia voakarakara loatra kanefa dia manana solika betsaka, any Atsimon'ny ranomasin'i Shina anelanelan'ny Vietnam, Shina, Taiwan ary Filipina. Samy mangataka sy mitady hitoetra eo amin'ireo sombin-tany kely ireo izay miparitaka manerana ny iray amin'ireo ranomasina be mpitsidika indrindra maneran-tany ireo hery miisa efatra ireo.
Hetsi-panoheran'ny tanora Vietnamiana manohitra ny fangatahan'ny Shinoa ny Nosikely Spratley sy Paracel tamin'ny volana Desambra 2007. Misy sary bebe kokoa ao amin'ny Flickr.
Hetsika manohitra an'i Shina notarihin'ny tanora Vietnamiana, izay mampiasa aterineto amin'ny fomba maro ihany koa. Ny tsindry ataon'ireo tanora mpitia an'i Spratley dia nitondra nankany amin'ireo tatitra avy amin'ilay mpihira fanta-daza My Tam izay tsy nanaiky ny hitondra ilay Lelafo Olaimpika. Navoaka tamin'ny karazana sary ity voalaza manaraka ity, fa tsy toy ny lahatsoratra, noho izy tsy ho voavakin'ireo fitaovana mpanao sivana ao amin'ny aterineto sy ny milina mpanao fikarohana – hanehoana fa tsapan'ireo bilaogera hoe mihamitombo ny sakana hahafahana mampiasa aterineto ao Vietnam. Ialàko ny famoahana anaranà bilaogera sy ny fidirana amin'ny rohiny.
“Tokony hiahiahy mafy ianareo mikasika ny toedraharaha ankehitriny sy ny politika tsy azo ekena momba ny fifandimbiasan'ny mpitondra ny afo olaimpika – Tsy maintsy hoterena ihany i MT [My Tam] hitondra ny afo olaimpika amin'ny 29/4… Satria niparitaka haingana be teo amin'ny aterineto sy teny amin'ireny sehatra fiaraha-midinika …amin'ny fahitalavitra sy ny gazety vahiny ireny… ny vaovao miresaka ny fandàvan'i MT tsy hitondra ny afo olaimpika, niteraka fiantraikany nampiahiahy sy nisafotofoto izany. Lazain'ny vaovao ho ansika tsy hahazo alalana handao ny firenena i MT mandritra ny firosoan'ny afo olaimpika ary mety hahita olana izy any aoriana any.”
Ny fihetsiky ny governemanta manoloana olona iray malaza mpanohitra ao amin'ny aterineto dia ny famonoana izany an-karanany sy ny fanaovana izay fomba rehetra hitondràn'i My Tam ilay afo. Taoriana kelin'io dia voapika sary nitsikitsiky io artista malaza io tamin'ny 29 Aprily rehefa tonga ny anjarany teny an'arabe tao an-tanànan'i Ho Chi Minh, teo anelanelan'ireo mpiambina shinoa nanao ny fanamiana miloko manga.
Fomba azo natao koa ny hetsi-panoherana nandritra ny fifanolorana ilay afo, fa tena bitika loatra izy ireo ka mora nofehezina.
Namoaka ity lahatsoratra ity ilay bilaogera haivuong63, nasongadiny tao anatin'izany ny hetsi-panoherana mahomby iray [vn] tao anatin'ilay fifanolorana ny afo. Hita eto indray, ny fomba fiteny feno fitandremana nataon'i haivuong63 dia maneho tsara ny fisian'ny sivana amin'ny fampiasana aterineto sy ny fanentanana ny hetsi-panoherana.
Raha ny hevitro manokana, tokony hanana tanjona mazava tsara ny hetsi-panoherana ary atao amin'ny fomba mifanaraka amin'ny tokony ho izy, izany hoe mampiakatra ny feontsika mikasika ny fananiham-bohitra ataon'i Shina ao amin'ny ranomasim-ben'i Vietnam sy ny faritra rehetra misy ny taniny… indrindra indrindra any amin'ny Nosikelin'i Spratley sy Paracel izay mamintsika tokoa. Noho io antony io, tsy tokony hanaotao foana isika amin'ny fanelingelenana ny firosoan'ny lelafo…Tsy maintsy asehontsika fa mikasa hanao hetsi-panoherana isika, fanoherana malefaka ho an'i Spratley sy Paracel. Tsy tokony hanohitra ny fitondrana lelafo amin'ny lalao olaimpika isika, eny fa na i Beijing aza no mahita tombony aminy.
Maro ireo Vietnamiana no mbola miahiahy fatratra an'ireo mpifanolobodirindrina aminy avy any andrefana izay mihamatanjaka hatrany hatrany, araka izay hita tamin'ny valinteny manindrona nataon'ny bilaogera Ngu Yen ho an'i vuonghai63:
Tsapako fa raha tsy maintsy hanao hetsi-panoherana iray isika dia tsy ho vitantsika akory ny hanao izay hiverenan'ireo Nosy roa ireo ho antsika satria efa nanaiky am-pahanginana ny zava-misy ny firenentsika ary matanjaka loatra ihany koa ireo miaramila toa jiolahimboton'i Shina. Raha ny marina, rehefa te-hanafika an'i Vietnam izy, dia vitany tokoa izany. Ankoatr'izay, ny Minisitra vaovao misahana ny fiarovam-pirenena ao Shina dia lehilahy tsy mahalala fomba sy misetrasetra, manambonimbony tena ary lehilahy manao zavatra tsy am-piheverana. Tsy afaka manao zavatra tokana akory ny firenentsika [momba an'i Spratley sy Paracel] satria maro ireo mpitsikilon'i Shina mandehandeha eny rehetra eny ary mitazona andraikitra ambony ao amin'ny milin'ny governemanta.
Tsapan'ny vahoaka Vietnamiana fa afaka ataony ny manohitra ilay mpifanolobodirindrina aminy izay fantatra ara-tantara fa tia ady, saingy asongadin'izany fa vitsy an'isa ny hetsi-panoherana eo amin'ny samy mpiray tanindrazana, ary mety hampidi-doza avokoa rehefa mety ho hetsi-panoherana. Tamin'ny volana Janoary taona 2008, nanao hetsipanoherana momba an'i Spratley sy Paracel ilay bilaogera Dong A SG ary nosamborina sy nogadraina, tsy nolazaina ny mombamomba azy, noho izy nanaitaitra ny vondrom-piarahamonin'ireo bilaogera. Ny antony ofisialy nisamborana azy dia ny fanaovana hosoka teo amin'ny hetra, saingy fotoana fohy talohan'ny fisamborana azy, nanao tatitra ireo bilaogera hoe notsidihan’ i Dong A SG ilay blaogera, Dieu Cay , mpitia an'i Spratley sy Paracel.
Ankehitriny rehefa niditra tamin'ny OMC (Fikambanana Erantany momba ny Varotra) i Vietnam dia tsy miatrika ny tsindry iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona araka ny efa nahazatra azy, kanefa mandritra izany fotoana izany dia iharan'ny faneriterena avy amin'i Shina, ilay mpiara-miombon'antoka aminy eo amin'ny varotra. Io fifangaroana io dia mety hanidy tanteraka ny varavarana fidirana ho an'ny tanora Vietnamiana eo amin'ny fikatrohana fanoherana an'i Shina.
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny China Beat